Safal Khabar - उद्योगी र किसानको अडानले कृषिमन्त्री भुसाल द्विविधामा
उद्योगी र किसानको अडानले कृषिमन्त्री भुसाल द्विविधामा
शनिबार, २१ मङि्सर २०७६, ०८ : ५८
काठमाडौं । चिनी उद्योगी र उखु किसानको अडानले कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल द्विविधामा परेका छन् । उद्योगी र किसान दुबैले आफ्नो अडान नछोडेपछि मन्त्री भुसाललाई यतिबेला के गरुँ र कसो गरौँ भएको छ ।
दुबैले आफ्नो अडान नछोडेपछि उखुको समर्थन मूल्य सिफारिस प्रक्रिया लम्बिने पनि लम्बिने भएको छ । उखु किसानहरुले मूल्य नबढाए उखु खेती नै छोड्ने चेतावनी दिएका छन् भने उद्योगीले मूल्य बढाए उद्योग बन्द गरी चाबी बुझाउने चेतावनी दिएका छन् ।
दुबैको अडानबाट भर्खरै कृषिमन्त्री सम्हालेका भुसाललाई यतिबेला थाल खाऊँ कि भात खाऊँ भएको छ । किसानले सिंहदरबारमा भएको त्रिपक्षीय छलफलमा आफूहरुले मल, बीउ, श्रमिक लागतजस्ता कुराले उखु खेतीको लागत बढेको गुनासो गरेका थिए ।
कृषि मन्त्रीसमक्ष उखु उत्पादक किसान महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले उखुको मूल्य नबढाए खेती नै नगर्ने चेतावनी दिए । मूल्य बढाए उद्योगीहरुले भने गत वर्षकै समर्थन मूल्य अधिक भएको भन्दै मूल्य बढाउन नसकिने बताइरहेका छन् ।
कृषि मन्त्री भुसालबाट किसानलाई गत वर्षकै मूल्यलाई न्यूनतम मानेर समर्थन मूल्य सिफारिस गर्ने आश्वासन पाएका छन् । तर कार्यान्वयन कति होला भन्नेमा किसान शंका गर्छन् । गत वर्ष तोकिएको मूल्य पनि उद्योगीले नदिएको तथा अनुदान पनि नपाएको भन्दै किसानहरु आर्कोशित थिए ।
यता उखुको मूल्य अधिक भएकाले समर्थन मूल्य नबढाउन चिनी उत्पादकहरुले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको उद्योगी राजकुमार अग्रवालले बताए ।
‘चोर बाटोबाट नेपाल भित्रिने भारतीय सस्तो चिनी, सरकारले हरेक वर्ष गर्ने आयात र महँगो उत्पादन लागतका कारण चिनी उद्योगहरु धरासायी भएका छन्’ उनले भने ।
एक किलो चिनी उत्पादन गर्न लाग्ने कुल खर्चको ८३ प्रतिशत लागतमै खर्च हुने भन्दै उनले समर्थन मूल्य बढाए उद्योग बन्द गर्ने बताए ।
दुबैको अडानबाट कृषिमन्त्री भुसालले कुनै निर्णय गर्न सकेका छैनन् । समर्थन मूल्य सिफारिस गर्न कृषिमन्त्री भुसालले उद्योगीहरुसँग थप एक साताको समय मागेका छन् भने किसानलाई समर्थन मूल्य सिफारिस गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
सरकारले गत वर्ष उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्वीन्टल ५३६ रुपैयाँ ५६ पैसा तोकेको थियो । जसमा प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदान सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । तर सरकारले तोकेको मूल्यमा उद्योगीले उखु नकिनेको र किन्नेले पनि उधारो नतिरेको किसानहरुको गुनासो छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४\_७५ मा प्रतिक्विन्टल ५ सय ३१ रुपैयाँ, २०७३\_७४ मा प्रतिक्विन्टल रुपैयाँ, २०७२\_७३ मा ४६१ रुपैयाँ तोकेको थियो ।
#चिनी उद्योगी #उखु किसान
चिनी मिल संचालकको मनोमानी, उखु कृषकलाई किन दिईयो थोरै रकम ?
सर्लाहीका किसान मायाशंकर यादवको परिवारले अन्नपूर्ण चिनी मिलबाट २५ लाख पाउनुपर्ने थियो। उनका दाजु र...
उखु किसानको समस्या समाधान गर्न मानव अधिकार आयोगको आग्रह
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले उखु किसानका समस्या समाधान...
पश्चिम नवलपरासीस्थित लुम्बिनी चिनी मिल सुनवलले सरकारले...
२. ‘तान्दातान्दै श्रीमती र छोरीलाई पुर्यो’ : पहिरो पीडित
३. सलह पुनः नेपाल फर्किन सक्ने सम्भावना, सतर्क रहन आग्रह
४. मेरो प्रेम सम्बन्धका बारे आएको टिकाटिप्पणी र समाचारमा कुनै सत्यता छैन : पूर्णिका शाह
५. एक स्वास्थ्यकर्मीले सारे १२ जनालाई कोरोना, तीन वटा वडा सिल
६. असारे विकासको नमुना : निर्माण सम्पन्न भएको १० दिनमै भत्कियो नाला
७. आज दिनभरको मौसम कस्तो रहला ? भारी वर्षाको सम्भावना
८. विदेशमा रहेका कोरोना संक्रमित नेपालीहरु मध्ये ९२ प्रतिशत संक्रमणमुक्त
९. ठगी गर्नेमा म्यानपावर व्यवसायी अत्यधिक